Optical Lens စက်ရုံ၊ ပေးသွင်းသူ - China Optical Lens Manufacturers
၁.၄၉၉ Flat Top Bifocal Lens
1.499 Round ထိပ်တန်း Semi ပြီးဆုံး UC / HC
သတ္တု Optical Frame
၁၈ နှစ်စက်ရုံ Graphene Optical Lens - ၁.၆၇ MR-7 ...
Med Lens Optical Clinic အတွက်စူပါ ၀ ယ်ယူမှု - ၁.၅၆ ...
တရုတ်ပညာရှင်ကွန်ပြူတာဖန်ခွက်များကို ၀ ယ်ယူ - Multifo ...
OEM / ODM စက်ရုံ Flat Top Photogray မှန်ဘီလူး - High Inde ...
ကြီးမားသောလျှော့စျေး D28mm Flat Top Lens - 1.499 Index L ...
Hot sale စက်ရုံ Blended Bifocal - ၁.၆၇ MR-7 မြင့်သော ...
Hot sale စက်ရုံကွန်ပျူတာမျက်မှန် - ၁.၆၁ မျက်မှန် ...
1.56 Photochromic Grey ကတစ်ခုတည်းသောရူပါရုံကိုမှန်ဘီလူး AR Coating
Coating: HC， HMC
Whatsapp, Skepe, Wechat, အီးမေး
လှည့်ဖျား Photo1.67 Photochromic Grey MR-7 တစ်ခုတည်းသော Vision မျက်ကပ်မှန်များ AR Coating
Semi Finished 1.56 Photochromic Grey တစ်ခုတည်းသော Vision မျက်ကပ်မှန် AR Coating
Semi Finished White ၁.၉၉၉ အညွှန်းကိန်း Flat Top Bifocal မှန်ဘီလူးများကို CR39 ပစ္စည်းများမခြုံဘဲဘဲ
အဖြူ 1.56 freeform တိုးတက်သော9+ 4mm ပိုမိုတိုတောင်းသည့်စင်္ကြံမှန်ဘီလူး
Vision ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: Freeform
စင်္ကြံ:9+ 4mm
Wanbao လမ်း၊ Fenghuang စက်မှုဥယျာဉ်၊ Yanling Town၊ Danyang City, Jiangsu Province, China
ထုတ်ကုန်အသစ်များ ၁.၅၆ Photochromic HMC ...
ထုတ်ကုန်အသစ်များ ၁.၅၆ Photochromic HMC Optical Lens (အစိမ်း၊ အဝါရောင်၊ ပန်းရောင် / ခရမ်းရောင် / လိမ္မော်ရောင်၊ အပြာရောင်အရောင်များ) သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်နှင့်သင့်ကိုထိရောက်စွာအစေခံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်ကျေနပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးဆုဖြစ်သည်။ ကြှနျုပျတို့မှာ ...
Bifocal မြင်ကွင်းနှစ်လိုင်းနှင့်လိုင်းတစ်ခုစီခွဲထားသောမှန်ဘီလူး။ ယေဘုယျအားဖြင့်ထိပ်သည်အကွာအဝေးအမြင်အာရုံ (သို့) ကွန်ပျူတာအကွာအဝေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအောက်ခြေသည်စာဖတ်ခြင်းကဲ့သို့သောအနီးအနားရှိအမြင်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။ တစ် ဦး Bifocal မှန်ဘီလူးထဲမှာနှစ်ခု fi ...
SILMO2020, Paris International Optical and Optical Fair, အခုကြိုတင်ဘွတ်ကင်လုပ်ထားတယ်။ SILMO France International Optical Fair သည်နှစ်စဉ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နိုင်ငံတကာမှထင်ရှားသောပြပွဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာ 1 ရက်အတွင်းစတင်ခဲ့သည်။
©မူပိုင်ခွင့် - 2010-2021: မူပိုင်ခွင့်များရယူထားပါ။ 苏 ICP 备 11022256 号 -1